Bakhala ngodoti ongalandwa eSobantu | News24
Bakhala ngodoti ongalandwa eSobantu
Omunye udoti ogcina ungalandwanga endaweni yaseSobantu.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
UMPHAKATHI waseSobantu uthi usukhathele umasipala olanda udoti uma ngabe kuthanda wona ekubeni bekhokha.
Umphakathi wakule ndawo uthi udoti wabo ubujwayele ukulandwa njalo ngoLwesithathu emini kodwa manje abazi ukuthi ulwandwa ngolwesingaki njengoba iloli lakamasipala elithutha udoti lizifikela nanoma inini uma ngabe lithanda .
Amalunga alo mphakathi athi inkinga yaqala ngonyaka owedlule ngesikhathi iloli liqala lifika ngezikhathi zantambama udoti usuhlale emgwaqeni usuku lonke omunye waze wadatshulwa nayizinja zawuchitha phansi.
UNks Snenhlanhla Ndlovu utshele i-Echo ukuthi manje isimo sesedlulele njengoba iloli livele lifike ebusuku sekuzoshaya amabili okanye ezintathakusa , okanye lingafiki nhlobo.’
“Noma selifika ngalobobusuku lizifikela ngezinsuku ezithandwa ilona. Asilali ebusuku iloli libanga umsindo lishaya ne-hooter. Ubani ngempela ongavuka ebusuku akhiphane nodoti? Lento eyenzekayo ukuhlukumezeka nje.
“Into ecasula kakhulu ukuthi siyawukhokhela umasipala kodwa wona uyahluleka ukuthi wenze umsebenzi wawo. Kwesinye isikhathi size siphoqeleke ukuthi siqashe abantu ukuthi bayosilahlela udoti ngezandla bese sibanikeza u-R10 kwazise kuke kuphele amasonto amabili umasipala ungafikanga uzolanda udoti,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi elikhathazekile uZethu Madlala uthe : “Ngesonto eledlule nje iloli lakamasipala lizifikele ezintathakusa ngoLwesibili futhi. Bathi ubani ngempela ozovuka ekuseni? Kungani bengasitsheli uma ngabe sekukhona ushintsho mayelana nokulandwa kwadoti ukuze sizokwazi? Lento yokuthi siloku sikhipha udoti wethu udliwa izinja ziwusaphaza phansi sekumele siphinde siqoqe futhi isibuyisela emuva. Sikhathele manje sesibekezele kwaze kwanela sifuna izimpendulo ukuthi kwenzakalano,” kubeka yena.
Amanye amalunga omphakathi akulendawo athi wona awasazihluphi nanokuthi awukhiphe udoti ngoba vele awulandwa .
“Cabanga uhambe uye emsebenzini ushiye ukhiphe udoti ubuya emsebenzini usaphazeke phansi izinja ungalandiwe. Sekufanele ukuthi uqale phansi uwuqoqe uyozihlela wona. Angeke nje sikhathele umasipala uhluleka ukwenza umsebenzi wawo,” kusho elinye ilunga lomphakathi. Imizamo yokuthola ukuphawula kukamasipala uMsunduzi ayiphumelelanga njengoba kuze kwashaya isikhathi sokushicilela bengayiphendulanga imibuzo abathunyelelwe yona.